Ny tohatra sy ny hava-borona dia vita amin'ny alàlan'ny prosesrusion, ary atambatra amin'ny sangan'asa samihafa. Izy ireo dia manana ny asan'ny tohatra mahazatra sy ny sisilin'ny. Ho fanampin'izany, ny tohatra sy ny haingon-atelina fiberglass dia afaka manohitra ny vatohara sy ny harafesina, vokatra mety tsara ho an'ny tontolo simba.
Ny fikosoham-borona vita amin'ny fibra vita amin'ny jrain dia rindrambaiko vovo-mahery matevina izay safidy safidy azo ahodinam-bokatra simika ho an'ny fampiharana indostrialy maro.
Type: varavarana misokatra sy tontonana tontonana
Ny Jrain dia afaka manamboatra vokatra vita amin'ny fiberglass toy ny fandriana fitsaboana, ny tiana mitsangana / fanohanana, mpanangona hamandoana, boaty milalao, vilany voninkazo, vokatra fanonganana, amponga ary miankina amin'ny takian'ny mpanjifa amin'ny loko, ny endrika, ny habe, ny fiasa, ny tsindry ary ny mari-pana.
Manamboatra fiara marobe sy vatan-tsambo samihafa ny jrain. Izy ireo dia vita amin'ny alàlan'ny fanamboarana tanana, fa ny refy kosa azo fehezina ao anatin'ny fandeferana kely. Manjary miha-malaza hatrany amin'ny tsenan'ny sinoa sy eran-tany ny endrika tsara tarehy, ny endriny matevina ary ny jiro sy ny lanjan'ny fiberglass maivana.
Modely: namboarina araka ny takian'ny mpanjifa
Ny fonon-tavy Fiberglass dia misy karazan-javatra maro isan-karazany ao anatin'izany saingy tsy voafetra amin'ny fonon-trafika, fonon-tselatra mangatsiatsiaka, silo sarony, fonon-tantely (ho fiarovana), satroka, fonon-drano mandrobona, mandrakotra ny fanesorana ny biolojika, sns.
Habe: misy habe amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
Endriny: endriny rehetra arak'izay fangatahan'ny mpanjifa
TheNy fanamafisana sy ny rafitra filtration mahomby dia ampahany tena ilaina amin'ny zava-maniry fikarakarana rehetra. Ny klitoria sy ny mpampita an'ny fiberglass dia natao hanesorana ireo solosaina azo antoka ao anaty rano, loto ary fangatahana indostrialy.
Fitterglass fittings amin'ny ankapobeny dia ahitana flanges, elbows, tees, reducers, crosses, spraying fittings, sy ny hafa. Izy ireo dia matetika ampiasaina amin'ny fampifangaroana ny rafitry ny fantsona, ny fitodinana, ny atody ny simika, sns.
Habe: namboarina manokana
Fiberglass rafitry plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika (na pipa FRP) dia matetika no fitaovana safidy ho an'ny rafitra fanodinana fanodinana sy rafitry ny rano isan-karazany.
Ny fampifangaroana ny tanjaky ny FRP sy ny fifanarahana ny simika amin'ny plastika, ny fantsona fiberglass dia manome mpanjifa manana safidy tsara kokoa amin'ny alika metaly lafo vidy sy vy vita amin'ny vy.
Habe: DN10mm - DN4000mm
Dwi Laminate Products
Amin'ny fampifangaroana linera thermoplastic isan-karazany toy ny PVC, CPVC, PP, PE, PVDF ary HDPE miaraka amin'ny plastika fanamafisana fiberglass (FRP), ny Jrain dia manolotra vahaolana ho an'ny tontolo mafana sy marefo.
Ny haben'ny: tsy voafetra amin'ny bobongolo na lasantsy misy, ny habe dia azo faritana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fangatahana.
Andian-tsofina fibra-java no misy andian-tsiranoka fibre toy ny vondron-javatra, reakira, tondra-drano, mpanentana, mpisintaka, Venturi, mpamaritra laminate roa, tazom-bary amin'ny rambony ary ny sisa.
Famolavola grating, Mamatotra fanamafisana FRP, hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Nohavaozina Fiberglass, Masinina fanamafisana GRP,